Ibrahimovic, Coutinho Iyo Requelme Oo Hoggaaminaya Shax Laga Sameeyey Ciyaartoygii Ugu Liitay Barcelona Qarniga 21aad – Cadalol.net
Qarniga 21aad, saxeexyadii ay Barcelona samaysay waxa qariyey xiddigaha kasoo baxay kulliyada La Masia oo kusoo kacaamay farsamo kubbad-isku-dhiib oo aan baqasho lahayn, taas oo noqotay hal-beegga lagu cabbiro laacib kasta oo kusoo biira naadiga.
Taatikadan oo caan ku ah magaca ‘Tiki-Taka’ waxa hormood u ahaa Xavi Hernandez iyo Andres Iniesta, waxaase si layaab leh ula qabsadya Ronaldinho iyo Samuel Eto’o, halka uu Deco ahaa mid la nooc ah kuwa kulliyadda kasoo baxay.
Lionel Messi, Gerard Pique iyo Sergio Busquets ayaa ah saddexda laacib ee ay farsamadaasi kusii jirto ee Camp Nou jooga waqtigan, waxaanay khiddadan barayaan ciyaartoyda Arthur Melo, Frankie de Jong, Antoine Griezmann, Sergi Roberto oo u muuqda inay dhaxlayaan kubadda quruxda badan ee ay caanka ku tahay Blaugrana.
Waqtiga ay xiddigahi wacdaraha dhigayeen, Barcelona waxay samaysay saxeexyo badan oo ay doonaysay inay noqdaan cudud dhiig cusub ku kordhisa safkeeda, waxaanay qaarkood kasoo bixisay lacago badan, laakiin waxay ku dhamaysteen niyad jab iyagoo si degdeg ah shandaddooda uga qaatay shandadahooda.
Wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain ayaa soo ururiyey shax ka kooban 11 ciyaartoy oo koox laga sameeyey, kuwaas oo ah xiddigihii ku fashilmay inay la jaan-qaadaan Barcelona.
Ciyaartoydan waxa ugu horreeya halyeyga reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic, waxaana ku weheliye Philippe Coutinho, Requelme iyo Quaresma, kuwaas oo dhamaantood lacago badan ay kasoo bixisay kooxdu.
Akhriso shaxda oo dhamaystiran:
Goolka: Richard Dutruel
Difaaca: Martin Caceres, Dmytro Chygrynskiy, Thomas Vermaelen, Yerry Mina
Khadka dhexe: Alex Song, Andre Gomes, Ricardo Quaresma, Juan Roman Riquelme, Philippe Coutinho
Weerarka: Zlatan Ibrahimovic